तन्नेरी निर्यात- फिचर - कान्तिपुर समाचार
हामीसँग युवा उत्पादनशील जनशक्ति ५६.५ प्रतिशत छ । १६–४० उमेर समूहको ऊर्जाशील जनशक्तिसमेत ३८.८ प्रतिशत छ । तर राज्यले यो जनशक्ति उपयोग गर्न सकेको छैन ।
फाल्गुन ८, २०७५ होम कार्की
काठमाडौँ — जावलचोक, ललितपुरस्थित ह्युमन रिसोर्स एन्ड सोलुसन म्यानपावर कम्पनीमा ज्योति तामाङ भेटिइन् । कम्पनीमा कुवेत जान इच्छुक कामदारसँग अन्तर्वार्ता चल्दै थियो । ज्योति क्लिनिङ र उनकी श्रीमान् चालक काममा छानिए । ‘हामी बूढाबूढीले कुवेतको एउटै कम्पनीमा जान निवेदन दिएका थियौं,’ नुवाकोटकी ज्योतिले भनिन्, ‘देश एउटै भयो । कम्पनी भने अलग ।’
कतारमा ६ वर्ष काम गरेर फर्किएकी उनले त्यतै फर्किन चाहेकी थिइन् । वैदेशिक रोजगार विभागले घरेलु कामदारको भिसालाई पुन: श्रम स्वीकृति नदिएपछि कतारको विकल्प कुवेत भयो । ‘कतारमा घरको काम गरें । साहु राम्रै थियो । १७ सय रियाल (५१ हजार रुपैयाँ) तलब नियमित दिन्थ्यो । कुनै समस्या थिएन,’ उनले भनिन्, ‘छोराले पढेन भनेर बिदामा घर आएँ । उताबाट साहुले बोलाएको बोलायै छ । यताबाट जान दिइएन ।’
आफ्नो एउटा छोरा दिदीको जिम्मा लगाएर ज्योति दम्पती कुवेत उड्दै छन् । ‘१० वर्षको तलब जग्गामा पर्‍यो । बाहिर बसेर कमाइरहेको मान्छेलाई यहाँको कमाइ खासै केही नलाग्ने रहेछ । यहाँको कमाइले खान मात्रै ठिक्क,’ उनले भनिन्, ‘घर त बनाउनुपर्‍यो ।’
अन्तर्वार्ताको पालो कुरिरहेका दैलेखका दिलबहादुर सेन ठकुरीले आफ्नो श्रम स्वदेशमा पोखेका छैनन् । ‘काम गर्न सक्ने भएपछि भारत छिरें । भारतको कमाइ आउजाउमै सकिन थाल्यो । बचत नभएपछि कतार गएँ । कतारको कम्पनी बन्द भएर फर्किनुपर्‍यो,’ ठकुरीले भने, ‘बाहिर गएपछि झ्याम्पै दुई वर्ष बसिन्छ । कमाइ बचत पनि हुन्छ । परिवारलाई छाडेर जाने इच्छा नभए पनि बाध्यता हो ।’
सिमरौनगढ–११, बाराका रामजीवन ठाकुरसँग १५ कट्ठा जग्गा छ । कृषिबाटै जीवन चलेको छ । उनी कृषिभन्दा वैदेशिक रोजगारतिरै आकर्षित छन् ।
साउदी अरबबाट फर्केको सात महिनामै उनी अर्को देश उड्ने तयारीमा छन् । ‘कम तलब भएर साउदीबाट फर्केको हो । यहाँ सात महिनासम्म रुचिअनुसारको काम खोजें । पाइनँ,’ उनले भने, ‘खेती बुबा आफंैले भ्याउनुहुन्छ । धेरै उत्पादन भए कुहिएर जान्छ । खेती मात्रै निर्भर भएर बस्नु पनि भएन ।’ उनलाई लाग्छ, जे जस्तो भए पनि अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारी नै जीवन धान्ने विकल्प हो ।
नेपाल लामो समयदेखि तन्नेरी निर्यात गर्ने देशका रूपमा चिनिँदै आएको छ । ‘मौका पाउनासाथ नेपाली विदेश जान थालेको इतिहास छ,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, ‘गुणकामदेवले काठमाडौं स्थापना गर्दा पनि सात सय विदेशमा छन् भन्ने थियो । सुगौली सन्धिपछि भोलिपल्टै जिलेस्पीको बडिगार्डले नेपाली युवा संलग्न भएको दुइटा बटालियन खडा गरेको भनाइ छ ।’
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत मानिस घरपरिवारबाट बाहिर बसोबास गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै ४३ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गइसकेका छन् । २०५०/५१ मा ३ हजार ६०५ नेपाली बिदेसिएका थिए । यो संख्या बढेर २०७०/७१ मा ५ लाख १९ हजार ६३८ पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा घटेर ३ लाख ५४ हजार ८२ मा आइपुगेको छ । विदेश जाने पुरुष ९५.६२ प्रतिशत र महिला ४.३८ प्रतिशत छन् । महिलाको संख्या क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेका छन् ।
एक सय ७२ देशमा नेपालीका लागि श्रम गर्न खुला छ । वैदेशिक रोजगारको ठूलो हिस्सा मलेसिया तथा खाडीमा केन्द्रित छ । मलेसिया २९.८८ प्रतिशत, कतार २१.५७ प्रतिशत, साउदी अरेबिया २०.३७ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्स १०.६२ प्रतिशत, कुवेत २.५४ प्रतिशत, कोरिया १.३२ प्रतिशत, बहराइन ०.८६ प्रतिशत ओमन ०.६३ प्रतिशत, जापान ०.२१ प्रतिशत, लेबनान ०.३५ प्रतिशत र बाँकी देशमा ११.६५ प्रतिशत नेपाली गएका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या बनोटमा युवा उत्पादनशील जनशक्ति ५६.५ प्रतिशत पुगेको छ । १६–४० उमेर समूहको ऊर्जाशील जनशक्ति ३८.८ प्रतिशत छ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख युवा शक्ति थपिन्छ । जसलाई आफ्नो विकासमा प्रयोग गर्न मुलुकले सकेको छैन ।
अहिले इतिहासकै सर्वाधिक युवा जनशक्तियुक्त अवस्था हो । हाल १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका रोजगार व्यक्तिको संख्या अर्थात् श्रमशक्ति करिब १ करोड १८ लाख छ । प्रजनन दर घटेर २.१ प्रतिशतमा झरेको र औसत आयु बढेर ७० वर्ष पुगेको कारणले मुलुकलाई सक्रिय जनशक्ति (बोनस) उपलब्ध भएको हो । यस्तो उत्पादक उमेर समूहमा बेरोजगारीको आकार तथ्यांकमा २.१ मात्र देखिए पनि श्रमको अल्प उपयोग दर तीस प्रतिशत छ ।
अर्थविद् पौडेलका अनुसार एक विशेष कालखण्डमा पाउने जनसांख्यिक लाभलाई आफ्नो विकासमा प्रयोग गर्न नेपाल चुकेको छ । यो जनसांख्यिक लाभको फाइदा खाडी र मलेसियाले लिइरहेका छन् । नेपालमा सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म जनसांख्यिक लाभको अवस्था कायम रहनेछ । सन् २०३० सम्ममा यसमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार विसं २०४८–५८ को तुलनामा ०५८–६८ मा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । अघिल्लो दशकमा २.२५ प्रतिशत रहेकामा ०५८–६८ मा १.३५ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर यही कायम रहने हो भने आगामी ५१ वर्षमा मुलुकको जनसंख्या २०६८ को दोब्बर पुग्नेछ ।
युवाको ठूलो हिस्साले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा श्रम बजारमा अदक्ष जनशक्ति बढेको छ । नेपालको १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवामा १२ प्रतिशतले शिक्षा नलिएको, १० प्रतिशतले प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरेको र ४१ प्रतिशतले माध्यमिक शिक्षा पूरा नगरेको देखिन्छ । ‘नेपालमा रोजगार छैन भन्ने तथ्य गलत हो । बजारले आवश्यकताअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति पाएको छैन,’ नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडाल भन्छन्, ‘जोसँग सीप छ, उसलाई सहज रोजगार छ ।’ खाडी तथा मलेसियाले अदक्ष जनशक्तिलाई न्यून पारिश्रमिक दिई भरपुर उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १.५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र बाँकी ७४.५ प्रतिशत अदक्ष छन् । उपलब्ध श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त नबनाउँदा मुलुकले दोहोरो घाटा बेहोर्नुपरेको छ । एकातिर युवा शक्तिलाई स्वदेशकै श्रम बजारमा टिकाउन सकिएन । अर्कोतिर मुलुकमा भित्रिने विप्रेषणको आयतन घट्यो ।
श्रमशक्तिको पलायनले सबैभन्दा ठूलो असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार र कृषिमा गहिरो अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । नेपालले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । अहिले खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता भएको छ,’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन् । विश्व बैंकका अनुसार सन् २००८–१७ सम्म ४.७८ प्रतिशतले विप्रेषण वृद्धि भएको छ । यही अवधिमा धनको आयत २२.४९ प्रतिशतले बढेको छ ।
सन् १९६०–८० को दशकमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म थियो । सन् २००० मा आउँदा ४० प्रतिशत, २००७ मा ३३ प्रतिशत, सन् २०१६ मा २८.८ प्रतिशत रहेकामा २०१७ मा २७.६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आयको बचतबाट पठाएको विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १८:४०
ज्ञान–अनुभव साटासाट गर्ने र विदेशबाट आर्जित सीप–पुँजीबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा संगठितसमेत हुन थालेका छन् ।
फाल्गुन ८, २०७५ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले प्रत्येक दिन औसत १२ सय नेपाली रोजगारीको खोजीमा प्रवास पस्ने गरेको बताउँछ । कामको खोजीमा प्रवास गएर फर्किनेहरूको संख्या कति छ भन्ने जवाफ भने विभागसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीको अनुभव सँगालेर फर्किएका नेपाली के गरिरहेका छन् ? के उनीहरूको श्रम, सीप र पुँजीको उपयोग भइरहेको छ ? वर्षौंसम्म परिवार र समाजबाट अलग्गिएर बसेका उनीहरूलाई सामाजिक अन्तरघुलनको समस्याले पिरोलेको छ कि छैन ? विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरू संगठिन हुन थालेपछि यस्ता सवालमा पछिल्लो समय चासो बढ्दै गएको छ
मलेसियाबाट फर्केका कामदारले हालै ‘मलेसिया रिटर्नी समाज नेपाल’ गठन गरेका छन् । ‘मलेसियामा काम गरेर नेपाल फर्केकाहरूलाई एकत्रित गर्न र उनीहरूको श्रम र सीपअनुसार रोजगारीको सम्भावना खोजी र अनुभव आदानप्रदान गर्न साझा चौतारी बनाएका हौं,’ समाजका महासचिव रामचन्द्र नेपालले भने ।
मलेसियाबाट हालै फर्केका रामचन्द्रको अनुभवले भन्छ, ‘वर्षौं नेपाली समाजबाट टाढिएका कारण प्रवासबाट फर्किएका कामदारहरू समाजमा घुल्न सकेका छैनन्, बदलिँदो समाजमा अवसरहरू खोज्न पनि सकिरहेका छैनन् ।’ उनको बुझाइमा परिवारको गर्जो टार्दै केही लाख रुपैयाँ जोगाएर नेपाल फर्केकाहरू उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूको यही चिन्ता र चासो देखेरै उनीलगायतले पहल गरेर संस्था खोलेका हुन् । पुसको मध्यमा काठमाडौंमा भएको पहिलो भेलाले २१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । समाजले सातै प्रदेशमा एक–एक संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । महासचिव रामचन्द्रका अनुसार संस्थाले सरकारले दिने सहुलियत ऋणका लागि सहजीकरण गर्ने, लगानीको अवसर खोज्ने योजना बनाएको छ ।
मलेसियाबाटै फर्केका ८ कामदारले अनामनगरमा सहयात्रा रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् । अरू तीन जनाको गोंगबुमा सहयात्रा टेलरिङ सेन्टर खुलेको छ । समाजले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सहयात्रा यातायात प्रालि दर्ता गरेको छ । मलेसियाबाट फर्केका कामदारले ५० देखि २ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने गरी सेयर वितरण गरेर सार्वजनिक सवारी चलाउने तयारी छ ।
रामचन्द्रका अनुसार प्रवासको कमाइ लगानी गर्ने ज्ञानको अभाव र लगानीलाई सहजीकरण गर्ने सरकारी अभ्यास नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू अलमलमा पर्ने गरेका छन् । ‘कैयन् त अलमलकै बीचमा कमाएको पैसा गुमाएर फेरि वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोज्न म्यानपावर वा दलाल भेट्न बाध्य छन्,’ उनले भने ।
विदेशबाट फर्केका कामदार संगठित हुने, ज्ञान–अनुभव साटासाट गर्ने र फर्केका कामदारहरूको सीप र पुँजीबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेरै ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल’ नामक संस्था पनि गठन भएको छ । गत असार २७ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम गरेर यो संस्थाले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो ।
१३ वर्ष दुबई बसेर फर्केका उत्तम अधिकारीलाई नेपाल फर्केपछि महिनौंसम्म के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने अलमल थियो । वर्षांैसम्म आफ्नो गाउँठाउँबाट टाढा बसेर काम गरेका उनलाई नयाँ अवसर के हुन सक्छ भन्नेबारे बुझाउने संयन्त्र थिएन । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूकै संस्थाको खाँचो महसुस गरे ।
उत्तमले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सामाजिक पुन:स्थापनामा राज्यको कुनै पहल छैन । यसरी फर्केका कामदारहरू एक्ला मात्रै छैनन्, अलमलमा पनि छन् ।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट वर्षौंपछि फर्केकाहरूको सामाजिक परिचय खुम्चिएको छ र उनीहरू परिवार र समाजमा राम्ररी घुलमिल हुन सकिरहेका छैनन् । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन हामीले संस्था खोलेका हौं ।’ साढे दुई वर्षअघि नेपाल फर्किएका उत्तमका अनुसार यो संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारीको पहल गर्ने, उद्यमशील बनाउने र लगानीको सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने काममा सघाउने गर्छ । यो संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूसँग भएको लगानी सही ठाउँमा लगाउन सहजीकरण गर्नेछ । संस्थाले अहिले लगानी बोर्ड बनाएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूको सीप र पुँजी सदुपयोग गर्ने सोच बनाएको छ ।
इजरायलको कृषि फार्ममा ६ वर्ष श्रम बगाएर २०६७ मा नेपाल फर्केका राजन मैनालीले नेपाल फर्किनेबित्तिकै प्रवासमा सिकेको सीप र पुँजी प्रयोग गरेर तरकारी फार्म सुरु गरे । उनको पहिलो प्रयासमा कलाकार हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र इजरायलबाटै फर्केका अन्य कामदारको पनि लगानी मिसिएको थियो । मह एग्रिकल्चरका नाममा सुरु गरिएको तरकारी फार्मले सफलता दिन नसकेपछि र लगानीकर्ताबीच कुरा नमिलेपछि उनी त्यसबाट अलग्गिए । पहिलो ६ वर्षे असफलताबाट नआत्तिएका राजन पछिल्लो चार वर्षयता तीन साथीसहित किसान एग्रिकल्चर चलाएर बसेका छन् । सातदोबाटोमा रहेको उनको संस्थाले अहिले थोपा सिँचाइ, ग्रिन हाउस र नेट हाउसका सेवा प्रदान मात्रै गर्दैन, तरकारी खेती गर्न चाहनेलाई तीनमहिने कृषि तालिम पनि दिन्छ ।
राजनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने पहल भइसकेको छैन । ‘नेपाली समाजमा कामको मूल्यांकन गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘इमानदार भएर कर्म गर्दा परिवार चलाउन र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने गरी अर्थोपार्जन गर्न भने सकिन्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट केही पैसा र आत्मविश्वास कमाएर फर्किएका धेरैजसो नेपालीमा हतारहतार करोडौं लगानी गर्ने, तामझाम गरेर उद्घाटन गर्ने अनि मुनाफामा पनि हतार गर्ने समस्या उनले देखेका छन् । आफैं काममा नघोटिएसम्म केही नहुने उनी बताउँछन् ।
गुल्मी भार्सेका टीकाराम श्रीशले जीवनको ऊर्जाशील २७ वर्ष प्रवासमा बिताए । २० वर्षको उमेरमा मलेसिया छिरेका उनले त्यहाँको माटो मात्रै खनिखोस्री गरेनन्, आफ्नो बैंस पनि उतै निखारे । उमेरको सिँढी चढ्दै ५० को सेरोफेरोमा पुगेका उनी स्वदेशमै केही गर्ने जोस बोकेर १३ महिनाअघि नेपाल फर्के । टीकाले आफ्नै गाउँमा किवी, सुन्तला, अगरउडको व्यावसायिक खेती र बाख्रापालन सुरु गरेका छन् । झन्डै सय हाराहारी सुन्तला र किबी, दुई सयवटा अगरउड रोपेका उनले ५२ वटा बाख्रा पालेका छन् । ३५ लाख रुपैयाँको लगानीमा नमुना बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपालन फार्म सुरु गरेका टीकालाई आफ्नै देशमा केही गरेर देखाउने उत्साह बढेको छ । यही उत्साहले लपेटिएर उनले बुटवलमा पनि ग्रिन हाउस सञ्चालनको तयारी गर्दैछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नै गाउँठाउँमा आफूले जानेको सीपअनुसार के–के गर्न सकिन्छ भनेर राम्रो योजना बनाइयो भने दु:ख हुँदैन ।’
गाउँमै केही गर्न खोजेका टीकाको उत्साहमा गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ । गाउँपालिकाले उनलाई थोपा सिँचाइ गर्नका लागि हालै १ लाख ५० हजार अनुदान दियो । उनले भने, ‘वर्षौं परदेश बसेर फर्केपछि झनै धेरैको माया र साथ पाइँदोरहेछ ।’
नेपाली समाज मूलत: प्रवासीको कमाइमा बाँचेको छ । वर्षौं परदेशमा काम गरेर फर्केकाहरूको हिस्सा समाजमा ठूलो छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका प्रतिनिधि पात्र र तिनीहरूले खोलेका संस्थाहरूको गतिविधिका आधारमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको समग्र विश्लेषण गर्न सकिँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका नीलाम्बर बडाल वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सामाजिक पुन:स्थापनाका निम्ति धेरै काम गर्नुपर्ने देख्छन् । वर्षौंको प्रवास बसाइबाट फर्किनेहरू बदलिँदो समाजमा अन्तरघुलन गराउन र उनीहरूका द्विविधा हटाउन सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । जस्तो कि, विदेशको सडक सञ्जाल, बजारको सुविधा र अन्य विकास देखेर फर्केका कामदारलाई आफ्नो देशमा पनि त्यस्तै अपेक्षा हुन्छ । ‘जब उनीहरू घर फर्किन्छन् र यहाँको असुविधा, सामाजिक समस्या, सरकारी प्रणालीको ढिलाइ र परिवार र समाजको अपेक्षा एकैसाथ देख्छन् तब उनीहरू अलमलमा पर्छन्,’ बडालले भने,’ ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी नीति जरुरी छ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई लक्षित गरेर केही काम नै नगरेको भने होइन । हालैमात्र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई अर्थोपार्जनको उद्यम गर्न सजिलो होस् भनेर ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सुरुवाती चरणमा बोर्डले विभिन्न उद्यम सञ्चालन गर्न चाहनेहरूको आवेदन मागेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार ७ सय ३१ कामदारले आफूले गर्न खोजेको कामको प्रकृति र लगानी खुलाएर गत कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्ममा बोर्डमा आवेदन बुझाएका थिए । बोर्डले यस्तो तथ्यांक संकलन गरेपछि अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पठाउने बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आवेदनका आधारमा कसलाई कति प्रतिशत सहुलियत दिने बैंकले निर्धारण गर्नेछ । सुवेदीका अनुसार यस्तो आवेदनको विश्लेषणबाट युवा केमा स्वावलम्बी बन्न खोज्दैछन् भन्नेबारे जानकारी हासिल हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप र पुँजीलाई उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न समयमा ऐन र निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । तर यसले उति आश्वस्त पार्न सकेको पाइँदैन । जस्तो कि, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि प्रवासी कामदार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको चार महिना नपुगेका कामदारलाई लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सुरु गरेको थियो । २०७४ अन्तिमसम्म १४ विभिन्न योजनामार्फत १० अर्ब ५८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र निष्कासन गरे पनि जम्मा ५ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ५६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र मात्रै बिक्री भयो । बचतपत्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको आम्दानी बचत गराउने र उनीहरू स्वदेश फर्केपछि उक्त बचतबाट लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको योजना हो तर व्यावहारिक कठिनाइ, सूचना प्रसारको परम्परागत शैलीका कारण सफल हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिलाई राज्यले अंगीकार गरेको देखिन्छ । संविधान (२०७२) मा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारसँग भएको सीप तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा परिचालित गरिने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ मा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप र पुँजी परिचालन गर्ने नीति छ ।
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था ‘ल एन्ड पोलिसी फोरम फर सोसल जस्टिस’ सम्बद्ध कार्यक्रमका संयोजक अनुराग देवकोटा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई लक्षित गरेर बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार फिलिपिन्समा सरकारले श्रम विभागअन्तर्गत ‘नेसनल रिइन्ट्रिगेसन सेन्टर’ स्थापना गरेको छ जसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्ने र उनीहरूको सीपअनुसार रोजगारीको बाटो देखाइदिने काम गर्छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूको पुँजी र सीपअनुसार आय आर्जनको बाटो देखाइदिने त्यस्तै सेन्टर नेपालमा पनि जरुरी छ,’ उनले भने । उनी अनेकन ऐन–नियममा केही वाक्य राख्दैमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुन:स्थापना सहज नहुने उनी बताउँछन् । ‘विशिष्टीकृत ऐन–नियमको खाँचो पर्छ,’ देवकोटाले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको यकिन तथ्यांकसमेत नराख्ने राज्यले उनीहरूको सीप र पुँजीलाई उपयोग गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्र विकास गरिहाल्ला भनेर यतिछिट्टै आस गर्न सकिन्न ।’
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १८:३८